ဆက်သွယ်ရေး Apps ကပ app များကို apk အပေါ်ရရှိနိုင်နောက်ဆုံးပေါ်ဟာ android apk
ပင်မစာမျက်နှာ » ဆက်သွယ်ရေး Apps ကပ » စာမျက်နှာ 2
Category: - ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Apps ကပ
ဤသည်နေ့ရက်ကာလကျနော်တို့ဆက်သွယ်ရေးဘို့ငါတို့ဖုန်းများအသုံးပြုလမ်းကယ့်ကိုအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ သွားကြောင်းကျနော်တို့တောင်းဆိုနဲ့ messaging များအတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းရှိသည်ဖို့အသုံးပြုသောအခါရက်ပေါင်းဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်ပြန်ရောက်တဲ့ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ, အီးမေးလ်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးများအတွက်သာနဲ့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဆက်သွယ်ရေး app များကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်။
ဤသည်နေ့ရက်ကာလ, အီးမေးလ်များထက်ပိုမြန်လိမ့်ယူဆဖြစ်ကြောင်းတော်တော်များများကအခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ သင်အလွယ်တကူနဲ့အခြားသူတစ်ဦးနှင့်အတူမျက်နှာချင်းဆိုင်လာနှင့် Real-time မှာသူတို့ကိုစာပို့နိုင်ပါတယ်။ လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ကယ်ဆယ်ရေးမှရောက်လာခဲ့ပြီးနေရာအရပ်ဖြစ်၏။ ဒါဟာသင်အနေနဲ့ app တစ်ခု၏အကူအညီဖြင့် Real-time အတွက်စာပို့နိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။ အပြင်ကအီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်၎င်း, သငျသညျကိုလည်းလူတစ်ဦးအွန်လိုင်းရှိမရှိသိနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ data share, Apps APK ကိုမှာမရရှိနိုင်ဆက်သွယ်ရေး app များကို အသုံးပြု. တခြားသူတွေနဲ့ video chat ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဤတွင် Android အတွက်ဆက်သွယ်ရေး apps များ၏ဘုံအမျိုးအစားအချို့ -
သင်အလွယ်တကူအင်တာနက်ပရိုတိုကောန်ဆောင်မှုကိုကျော် VoIP သို့မဟုတ် Voice ကိုသုံးပြီးအခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူရင်ဆိုင်ရန်မျက်နှာကိုလာနိုင်ပါတယ်။ သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးတယောက်ကိုတယောက်ကိရိယာမှဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား apps များမပါအပိုစွဲချက်များကုန်ကျခြင်းနှင့်သင်အလွယ်တကူဆဲလ်ဖုန်းသို့မဟုတ် desktop ကိုမှဆက်သွယ်နိုင်သည်။ app များကိုဤအမျိုးအစားကအကောင်းဆုံးဥပမာအချို့သည် app များကိုဤအမြိုးအစားအားလုံးနီးပါးဟာ android device များပေါ်တွင် run စသည်တို့ကို Skype ကို Google က Duo, Hangouts ကိုဖြစ်ကြသည်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့ချစ်ရသူနှင့်အခြားသူများနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောနှင့်ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ စာရိုက်အတူသင်တို့သည်လည်းဤအ apps များနှင့်အတူမီဒီယာဖိုင်တွေနဲ့စာရွက်စာတမ်းများမျှဝေနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျလညျးသငျပြောဆိုမှုများအပေါ်ရုပ်ပြောင်နှင့်အတူခံစားရဘယ်အရာကိုဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား apps များကိုလည်းစကားသံကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုထောကျပံ့နိုငျသညျ။ သငျသညျအခွားသူမြားနှငျ့ခြိတျဆကျကူညီနိုငျကွောငျးလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ apps များ၏တန်ချိန်ရှိပါတယ်။ သင်အလွယ်တကူသည်ဤ apps များနှင့်အတူအုပ်စုများအတွက် chat လို့ရပါတယ်။
Web ကို Conferencing
ဆက်သွယ်ရေးဤအမျိုးအစားများ, app များကိုများသောအားဖြင့်, လေ့ကျင့်ရေးဖြစ်ရပ်များများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဒီဇိုင်းအစည်းအဝေးတွေနဲ့ဝေးလံခေါင်သီတည်နေရာအတွက်အခြားသတင်းအချက်အလက်များပေးပို့ဖို့နေကြပါတယ်။ app များကိုဤအမျိုးအစားများကိုပေးဆောင်သို့မဟုတ်အခမဲ့နိုင်ပါသည်။ ဤအ apps များ၏ဘုံ features တွေ၏အချို့ VoIP, Whiteboard, စကားပြောခန်း, နှင့်မျက်နှာပြင်ဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒီ app ထဲကအတော်များများလည်းသတင်းအချက်အလက် annotating သကဲ့သို့ကောင်းစွာအစည်းအဝေးများမှတ်တမ်းတင်ရန်ဝေးလံခေါင်သီ desktop ကိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့် option ကိုအသုံးပြုကြသည်။ သငျသညျ Apps ကပ APK ကိုမှ apps များဤအမျိုးအစားများကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကား app များကိုလည်းအသံနှင့်ဗီဒီယိုအစည်းအဝေးတွေအတွက်အသုံးပြုနေကြသည်။ သင်အလွယ်တကူသင်တန်းသားများအခွင့်အာဏာလွန်သွားနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအကြောင်းအရာနှင့်စီးကဗီဒီယိုသို့မဟုတ် Podcast တခုကိုဝေမျှဖို့ဟာ android ဖုန်းနှင့်ဒက်စ်တော့နှစ်ဦးစလုံးမှာသူတို့ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤနည်း, သင်တန်းသားများကိုလည်းတုံ့ပြန်ချက်များကိုမှတ်စုစေရန်ထို option ရှိသည်။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အကြံပြုထားသကဲ့သို့ဤ app များကိုအီးမေးလ်များကိုအဘို့ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ သူတို့ကမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ပေါ်တွင်အသုံးပြုနဲ့ Windows နဲ့ Mac ပေါ်မှာ run နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကတခါမှာသင့်ရဲ့အီးမေးလ်များကိုဝင်ရောက်ဖို့ဆို POP ကိုသို့မဟုတ် IMAP အကောင့်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကအသုံးပြုသူများကသူတို့ရဲ့အဆက်အသွယ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ကူညီပေးဖို့ဟာအလွန်ရိုးရှင်းပြီး minimalistic interface ကိုရှိသည်။
Facebook အနေဖြင့်အလုပ်ခွင် Chat ကို
Google ကကြှနျုပျ၏စီးပွားရေး -...
လွယ်ကူသောဝေမျှမယ်: Wi-Fi ဖိုင်မှတ်တမ်း ...
maki: Facebook, Twitter ...
TouchCall - အခမဲ့ဂလိုဘယ် ...
AhaCall - အခမဲ့ဖုန်း ...
Gruveo - မှော်ခေါ်ရန် Link ကို
Reos ကို SMS: Android အတွက်တမန်
အခမဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများ, ဗီဒီယို ...
dual sim ကို SMS Messenger ကို
ခံစားချက် Messenger ကို - SMS ကို ...
လူတိုင်းဟာ - AI အခေါ်ဆိုမှု ID
အကောင့်အဆင့်အစီအစဉ် - Caller ID ကို & ...
ကြားပေါက် - ဒုတိယအချက်မှာဖုန်း ...
Recorder က Call
Zapya Go- အခမဲ့ဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်း ...
ငါ့ကို: Caller ID ကို & ပမ် ...
ကြှနျတေျာ့ရဲ့ IP Hide - မြန် ...
DirectChat (အားလုံးအတှကျအ ChatHeads)
TamTam Messenger ကို - အခမဲ့ ...
Cleanfox - သင်၏ရှင်းလင်း ...
Samsung က Link ကိုမျှဝေခြင်း
အခမဲ့ Wi-Fi Analyzer Manager ကို
XShare - မြန် File ...
မက်ဆေ့ခ်ျများ, စာသားနဲ့ Video Chat ...
ဟိုင်းဘာသာပြန်သည် - စကားပြော ...
Google Voice ကို
universal အီးမေးလ် App ကို
Phoner2ဖုန်းနံပါတ် + ...
လူမှု Messenger ကို - အခမဲ့ ...
တက်ဘလက် Messenger ကို
လွန်ခဲ့သော 1234... 35 နောက်တစ်ခု